Muxuu ujeedka safarka deg dega ah ee Aby Ahmed ku tegayo Kenya & Shirqool jira? | SMC
Home WARARKA MAANTA Muxuu ujeedka safarka deg dega ah ee Aby Ahmed ku tegayo Kenya...
Muxuu ujeedka safarka deg dega ah ee Aby Ahmed ku tegayo Kenya & Shirqool jira?
Dawladda Kenya ayaa shaacisay in Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed uu maalinta Arbacada ee toddobaadkan booqahso laba maalmood ah ku tegi doono dalka Kenya.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maalinta Arbacada ah ku kulmi doona magaalada Mooyaale ee Gobolka Marsabit, waxayna labada hoggamiye si wadajir ah u furi doono bar kontorol oo ku taalla xuduudda labada waddan.
Isla maalintaas waxay labada hoggaamiye booqan doonaan gobolka Lamu iyagoo kormeeri doona dhismaha dekedda cusub ee Lamu, dekaddaas oo isku xiri doonta adeegga Kenya, Suudaanta Koonfureed iyo Itoobiya.
Previous articleIsrasaaseyn khasaaro geystay oo ka dhacday Dhuusamareeb
Next articleItoobiya oo xaqiijisay in ciidamada ay toogteen shaqaale ka tirsan Qaramada Midoobey